Indlu Yakho Ebhishi '00741 - I-Airbnb
Indlu Yakho Ebhishi '00741
Punta Santiago, Humacao, Puerto Rico, Humacao, i-Puerto Rico
Emphakathini wethu uzojabulela izindawo zokudlela ezihamba phambili, izindawo zomculo, izitolo ezinkulu kanye nezindawo zokungcebeleka ezifana nezizinda zethu zokudoba eziyizifanekiselo kanye nesiqiwi. Indawo enhle kakhulu imizuzu ukusuka enxanxatheleni yezitolo, i-Naguabo boardwalk kanye nePalmas del Mar.
Woza uphile okuhlangenwe nakho kwakho kwangempela kwe-Airbnb. Indawo ethule izinyathelo ezimbalwa ukusuka ogwini negumbi elithokomele elinesimo somoya, i-smart tv ne-wi-fi elungile, lapho ungasebenzisa khona zonke izikhala zendlu nezinto zayo.
Ungaletha isikebhe sakho noma i-jet ski, sikhona isikhala futhi kuphephile.
Indawo esihlala kuyo iyindawo ethulile elungele ukuhamba ngezinyawo ngaso sonke isikhathi.
Ukutholakala kokwabelana kungase kuhluke, kodwa 100% etholakalayo ukuxazulula noma yisiphi isidingo noma ukuphazamiseka endaweni.
Hlola ezinye izinketho ezise- Punta Santiago, Humacao, Puerto Rico namaphethelo